> Resource > iPod > Music Transfer ka iPod in New Computer Si fudud
Computer hore dhintay, oo aad hesho mid ka mid ah oo cusub? Iyadoo files music badan ee aad iPod, waxaa laga yaabaa in aadan sugi karin loo wareejiyo computer cusub. Laakiin sidee? Haddii aad u hagaagsan iPod la maktabadda Lugood on computer cusub, waxaa laga yaabaa in aad lumiso heesaha oo dhan ku yaal.
Xaaladdan oo kale, si ay u gudbiyaan music iPod in computer cusub, waxaad u baahan tahay xoogaa gargaar ah. Eeg halkan: TunesGo Wondershare ama Wondershare TunesGo (Mac) . Tani qalab xisbiga saddexaad kaa caawinaysaa in aad dhakhso u gudbiyaan music on iPod in computer cusub. Haddii aad ku rakibtay maktabadda Lugood on computer cusub, aad awoodaan in ay sidoo kale ku wareejin music maktabadda Lugood ah. Intaa waxaa dheer, qalab tahay xaalad amni leh, taas oo aan marnaba tirtiri doonaa wax aad iPod.
Download qalab hoose si aad u leeyihiin isku day ah
Halkan, waxay kuu ogolaanaysaa 'isku day version Windows - TunesGo Wondershare in aad nuqulka music ka iPod in computer cusub. Sida user Mac ah, waxa kale oo aad kala socon kartaa tallaabooyinka fudud ee hoose, sababtoo ah labadii sidoo kale ka shaqeeya.
Bedelka music ka iPod in computer cusub
Si aad u billowdo leh, rakibi oo ay maamulaan this qalab waxtar leh on your computer. Markaas, daaqad u muuqataa sida shaashadda hoose ayaa muujinaya.
Tallaabada 1. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPod in computer cusub
Markaas, xiriiriyaan iPod in computer cusub adigoo isticmaalaya cable USB ah. Your iPod si deg deg ah lagu ogaan doonaa. Ka dib markii in, aad arki doonaa in aad iPod muujinaysaa ilaa uu furmo suuqa hoose. In column-ka tagay kooxda, waxaad ku eegaan karo xogta ku saabsan iPod.
Tallaabada 2. dhaqaaq music ka iPod in computer cusub
Hab dhakhso ah ay u guuraan music iPod in computer cusub waa in guji "Dhoofinta Music si gal" furmo suuqa hoose. Haddii aad rabto inaad u guurto music in Lugood maktabadda on computer cusub, guji "Dhoofinta iDevice in Lugood"> "Start"> dooran music oo guji "nuqul Lugood".
In la sii wado, waa in aad ku dhufo "Media" khaanadda bidix ee kooxda. On line ugu sareeya, guji "Music". Dhammaan heeso aad iPod yihiin waxaa lagu muujiyey. Sax off songs in aad rabto in aad u wareegto computer cusub. Markaas, guji "Dhoofinta in". Marka uu furmo suuqa file browser soo booda, meel u helo on computer cusub si loo badbaadiyo songs dhoofiyo.
Haddii aad jeceshahay si ay u gudbiyaan music iPod maktabadda Lugood on computer cusub, waxaad riixi kartaa saddexagalka hoos "Dhoofinta in"> "Dhoofinta in Lugood Library". Ama guji "Smart dhoofinta in Lugood".
Fiiro gaar ah: By gujinaya "Smart dhoofinta in Lugood", kuu soo gudbin karaa heesaha oo dhan in maktabadda Lugood ma u leeyihiin in ay maktabadda Lugood. Haddii aad guji "Dhoofinta in Lugood Library", si aad u maktabadda Lugood wareejin karaan qaar ka mid ah heesaha iyo heesaha oo dhan.
Iyadoo TunesGo, waxaad awood u playlists ka iPod gudbaayo computer cusub. In column-ka tagay kooxda ka, ogaato iyo guji "playlist". Ka dooro playlists in aad rabto in lagu wareejiyo. Riix saddexagalka hoos "Dhoofinta in"> "Dhoofinta in Lugood Library" ama "Dhoofinta in My Computer"
Isku day Wonershare TunesGo inay ka iPod wareejiyo music in PC.